Musiyano Wekuvanzika: zvazvinoreva kudhata redu | IPhone nhau
Kuti vakwikwidze nevakwikwidzi vayo, Apple yatanga kubheja zvakanyanya pahungwaru hwekunyepedzera. Google kana Facebook havana dambudziko kuunganidza data revashandisi uye nekuziva kuti vanozviita kusimudzira huchenjeri hwavo hwekugadzira uye michina yekudzidza (Mashini Kudzidza) masisitimu, asi Apple haifunge zvakafanana; Cupertinos ane hanya nehukama hwedu. Nechikonzero ichocho, muWWDC yekupedzisira ivo vakatiudza nezvazvo Kusiyana Kwakasiyana, yako system yekuunganidza data, kugadzirisa AI yako, uye panguva imwechete chengetedza zvakavanzika zvedu.
Mamwe makambani anogara achida kuziva zvinhu senge tiri, zvatinotenga kana mashandisiro atinoita keyboard, zvinosanganisira izvo zvatiri kutsvaga, asi hazviratidzike sekuti izvi zvakambonetsa Apple, kambani iyo, dzidziso, haina chekuita nazvo.ita nedhata revatengi vako: ivo havatengese kushambadza, chete zvigadzirwa zvavo. Tim Cook nekambani ipa michina yakachengeteka kuitira kuti vashandisi vanzwewo vakachengeteka, uye icho chinhu icho Apple isingade kuchinja.
1 Misiyano Yakavanzika inoongorora zvese, inodzivirira munhu
2 Musiyano Wekuvanzika unoshanda
3 Uye iro ramangwana reArtificial Intelligence?
Misiyano Yakavanzika inoongorora zvese, inodzivirira munhu
Sevamwe nyanzvi mu Machine Learning Uye AI, dambudziko reApple nderekuti kana ikasaita chimwe chinhu, ichave makore akareruka kumashure kwemakwikwi kana zvasvika kune vese vabatsiri. Apa ndipo panosanganikwa neYakavanzika yekusiyanisa iyo isu takaudzwa nezvayo munguva yakapfuura. WWDC. Craig Federighi akazvitsanangura seizvi:
Misiyano Yakavanzika inyaya yekutsvagisa munzvimbo yehuwandu uye ongororo yedata inoshandisa hashing algorithms, subsampling uye ruzha jekiseni kubvumidza iyi mhando yekudzidza kubva kunzvimbo zhinji uchichengeta ruzivo rweumwe neumwe mushandisi zvakavanzika zvachose.
Kusiyana Kwakasiyana kwete kugadzirwa kweapuro. Nyanzvi dzakadzidza chirevo ichi kwemakore, asi nekuburitswa kweIOS 10, Apple ichatanga kushandisa iyi pfungwa kuunganidza uye kuongorora data kubva kune keyboard, Spotlight, uye maNotes vashandisi.
Kusiyanisa Yakavanzika inoshanda ne algorithm kukodha kwedata rega, zvekuti munhu haakwanise kudzorwa kana data rezviuru zvevashandisi raongororwa kuti riunganidze akakura maitiro maitiro. Chinangwa ndechekuchengetedza hunhu hwemushandisi uye ruzivo rwe data ravo apo uchiwana ruzivo ruzhinji runobatsira kuvandudza kudzidza kwemuchina
iOS 10 Ichangoerekana yavhiringidza dhata redu mukati medu kifaa tisati tatumira kuApple, saka iyo data haizombotumirwa zvisina kuchengeteka. Kune rimwe divi, Apple haizochengete mazwi ese atinonyora nekhibhodi kana tsvagiridzo dzatinoita nekuti, sezvandambotaura pamusoro, hazvidi izvozvo. Vanhu veC Cupertino vanoti vanozogumira huwandu hwedata ravanogona kutora kubva kune mumwe mushandisi.
Apple yakapa magwaro ekuitwa kwayo kweKusiyana Kwekuvanzika kune purofesa Aroni Roth kubva kuYunivhesiti yePennsylvania uye purofesa, uyo angangodaro akanyora bhaibheri pamusoro pekusiyana kwekuvanzika (Algorithmic Foundations of Differential Privacy), uye akatsanangura basa raApple munzvimbo ino se "kupayona" kana "kuputsa pasi."
Musiyano Wekuvanzika unoshanda
Kusiyanisa zvakavanzika haisi tekinoroji yakasarudzika. Iyi nzira yekugadzirisa dhata iyo gadzira zvirambidzo kudzivirira data kubva kunehukama nevashandisi kongiri. Iyo inobvumira iyo data kuti iongororwe seyakazara, asi inowedzera imwe ruzha kune iyo data, izvo zvinoreva kuti wega wega wega haatambure panguva imwechete iyo iyo data inogadziriswa yakawanda. Adam Smith anozvitsanangura seinotevera:
Nehunyanzvi iri tsananguro yemasvomhu. Iyo inongodzora nzira dzakasiyana idhata racho rinogona kugadziriswa. Uye inovadzivirira nenzira isingatenderi ruzivo rwakawandisa pamusoro pechero imwe nhambo yekuburitsa nguva muboka re data kuti ribatanidzwe.
Kune rimwe divi, iye anofananidza Musiyano Wekuvanzika nekukwanisa kusarudza rwiyo rwepashure seri kweka ruzha rwedenga kubva kuredhiyo isina kugadzirirwa.
Ukangonzwisisa izvo zvauri kunzwa, zviri nyore chaizvo kufuratira static. Saka zvakada kufanana nezvinoitika nemunhu wega wega, haudzidze zvakawandisa kubva kune mumwe chete munhu, asi zvakazara unogona kuona mapatani akajeka.
Smith anotenda izvozvo Apple ndiyo yekutanga kambani hombe kuyedza kushandisa Kusiyanisa Zvakavanzika pamwero mukuru. Mamwe makambani senge AT & T akaita zvidzidzo, asi haasati ashinga kuishandisa.
Uye iro ramangwana reArtificial Intelligence?
Iyo nharo yeSilicon Valley yekuvanzika inowanzoonekwa kuburikidza nekuteerera mutemo, iyo inorema kuvanzika uye kuchengetedzeka kwenyika Kune makambani, iyo gakava riri pakati pekuvanzika uye maficha. Izvo zvakatangwa naApple zvinogona kuchinja zvakanyanya gakava iri.
Google neFacebook, pakati pevamwe, vakaedza kugadzirisa mubvunzo wekuti ungapa sei zvigadzirwa zvikuru nezvakawanda zvinhu panguva imwechete zvinoramba zvakavanzika. Kana Allo, Google meseji nyowani yekutumira mameseji, kana Facebook Messenger haigone kunyorera-kumagumo kunyorera nekutadza nekuti ese makambani anoda data revashandisi kusimudzira kudzidza kwavo kwemuchina uye nekugonesa bots avo kuti ashande. Apple inodawo kuunganidza mushandisi data, asi haibvise iyo iMessage yekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera. Smith anoti kuiswa kweApple kunogona kukonzera kuti mamwe makambani achinje pfungwa.
Muchidimbu, zvinoita sekunge Apple yakashinga kushandisa sisitimu yaitove nedzidziso dzinozotora data kubva kuvanhu vazhinji pasina kutyora zvakavanzika zvedu. Mumwe munhu angakuteedzera pane izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Kusiyanisa Kwakasiyana: zvazvinoreva kune yedu data uye iro ramangwana rekudzidza kwemuchina
Zvinokurudzirwa here kuisa iyo beta yeIOS 10 kana zvirinani kumirira?